ubusazi ukuba isamsung isungule iselfowuni yokuqala enikwe amandla elanga?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba i-Samsung isungule iselfowuni yokuqala enikwe amandla elanga?
Ngaba uyazi ukuba i-Samsung isungule iselfowuni yokuqala enikwe amandla elanga?
Kukho iimodeli ezingaphezu kwewaka kwiifowuni eziphathwayo zeselfowuni, ezisusela kwiziphatho eziphathwayo kunye neefowuni ezinobungakanani ezipokothweni ukuya kwii-smartphones zeGlass ephezulu. Iifowuni thina & apos; ukuqaqambisa namhlanje zikude kubukrelekrele, kodwa sicinga ukuba ukwahluka kwabo kubenza bafaneleke phantsi kwelanga ... ngokwenyani.
Ngo-2009, iSamsung yakhupha umhlaba kunye neepos zokuqala zefowuni esebenzisa amandla elanga. Yayisaziwa njenge Samsung Guru E1107 kwaye ibonakalisa iseli yelanga eyakhelwe kwipleyiti yayo yangasemva. Xa sivezwe kukukhanya kwelanga, iseli yavelisa umbane owathi kwakhona wagcwalisa ifowuni kunye nebhetri yeapos. Iseli encinci yelanga ayinakho ukubonelela ngamandla amaninzi, nangona kunjalo. Ukwenza ukuhlawuliswa okufunekayo kwimizuzu emi-5 ukuya kweli-10 yomnxeba welizwi, ifowuni kuye kwafuneka ifumane iyure kunye ne-apos; yamandla elanga. Okwangoku, inqaku lokutshaja kwelanga lenziwa ngengqondo xa unikwa iimarike ifowuni eyayijolise kuyo. Isiphatho sesandla sasenzelwe abathengi abahlala kwiimarike ezisaphuhlayo kunye neendawo apho ukucinywa kombane kwakuqhelekile ukwenzeka.
I-Samsung Blue Earth i-Guru E1107 yayingeyiyo neselfowuni kuphela yeselfowuni eyenziwe yi-Samsung. Emva kwexesha ngo-2009, inkampani yakhupha i-Samsung Blue Earth, ekwabonisa iseli yelanga ngasemva kwayo - iyure yelanga yaguqulwa yafumana imizuzu elishumi eyongezelelweyo yexesha lokuthetha. Ngokungafaniyo neGugu, i-Samsung Blue Earth ibonelele ngezinto ezimbalwa eziphambili, ezinje ngokufikelela kwiwebhu, iYouTube, kunye neenethiwekhi zentlalo. Inokudibanisa kwi-intanethi nge-Wi-Fi okanye kwi-3G, ngelixa irediyo ye-GPS inika indawo iinkonzo. Ithengiswe njengemveliso ye-eco-friendly, ifowuni yakhiwe ngezinto ezihlaziyiweyo kwaye yeza kwibhokisi yekhadibhodi erisayikilishwe ephindwe kabini njengendawo yokuma.
Ngaba i-Samsung kufuneka inike amandla elanga elinye ukuzama kwi-batch yayo elandelayo yee-smartphones, okanye ngaba abantu kufuneka baye ngokuzinikela Itshaja yelanga Endaweni? Sazise kumagqabantshintshi!
izikhombisi: Isamsung , Indawo yokuhlala
Iiselfowuni zeselfowuni zelanga
injineli yophuhliso lwesoftware kuvavanyo
umoya we-ipad vs ipad 8th isizukulwana
Ubungakanani bemikhosi yamajoni eKyocera DuraForce Pro 2 ifika kwi-AT & T.
IVerizon ivala iivenkile ezizezenkampani; abanye abathengisi abagunyazisiweyo bahlala bevulekile
I-iPhone 5 yokutshixa iqhosha emva kweeveki ezimbalwa zokusebenzisa, abanye abasebenzisi baxela
I-Samsung Galaxy S10e vs Galaxy S10 vs Galaxy S10 +: yeyiphi eyona ilungileyo kuwe? Ibhonasi: Lindela i-Galaxy S10 5G?
I-Samsung Galaxy Note 4 enamakhadi amabini e-SIM khadi kwibhodi yokuqhekeza ikhefu, ukumiliselwa eChina kungekudala
Iifowuni zakudala kodwa ezinkulu zikaGoogle Pixel ziyathengiswa ngamaxabiso asezantsi kakhulu namhlanje